“Boqolkiiba 14 oo keliya oo dhallinyaro ah ayaa ku jirta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya” – Kalfadhi
Dhallinyarada oo 75 boqolkii ka ah bulshadeenna Soomaaliya ayaa doodo xooggan wali ka qaba ka qeyb-gellin la’aanta ballaaran ee siyaasadda dalka, gaar ahaan hay’adda dowliga ah.
Inkasta oo sannadkan 2020/21 la filayay in dalka ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah oo dhallinyaro badan la saadaalinayay in ay kasoo muuqan doonaan, ayaana suura-gellin, waxaana dib dalka uu ugu noqon doonaa doorasho dadban oo hoggaankeeda ay door ku yeellan doonaan odayaasha dhaqanka.
Xildhibaan Hani Maxamed Aadan, oo aaminsan in dhallinyarada ay ku matasho Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegtay in dhallinyarada ku jirta Baarlamaanka ay hadda gaarayaan boqolkiiba 14, waxaana ay hadalkeeda sii raaciyay in ay farxad tahay in dhallinyaradaasi faraha badan ay ku jiraan Golaha.
“Marka siyaasadda guud laga hadlayo waxaa muuqata in 70 boqolkiiba ay dhallinyaro yihiin, madaama bulshadeena ay dhallinyaro u badanyihiin. Dhallinyarada waxaa ay kasoo muuqdeen meel kasta oo ay ka shaqeeyaan, wax la maalgashado waxaa u wanaagsan dhallinyaro, maxaa yeelay waxaa ay tamar badan u hayaan in ay qabtaan shaqooyin badan oo waxaa ay dib ugu noqdaan deeggaan doorashadooda isla markaana shacabka ay ka war hayaan”, ayey yiri.
Ismaaciil Maxamed, oo 27-jir ah oo qaba dood arrintaasi kasoo horjeeda ayaa sheegay in dhallinyarada markii siyaasadda laga hor joogsaday ay go’aansadeen in ay dalka ka tahriibaan, taasina ay mas’uuliyadeeda leeyihiin madaxda dowladda iyo odayaasha dhaqanka.
“Sida caadiga ah oday dhaqameedyada waxaa ay rabaan lacag, dhallinyaraddana ma heysaan lacag sidaasi awgeed qofka lacagta heysta ayaa mar walba mudnaanta leh”, ayuu yiri.
Xildhibaan Hani Maxamed Aadan, oo ka mid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa rajeyneysa in boqolkiiba 14-ka dhallinyaro ee hadda ku jira Baarlamaanka 10-aad ay tahay bilow wanaagsan, islamarkaanna ka qeyb-galka dhallinyarada uu kordhi doono sannadaha soo socda.
Heerka shaqo la’aanta dhallinyarada waxbaratay ee Soomaaliya ayaa sii kordhaysa, xilli sidoo kale ay sii kordhayso tirada dhaliyarada ka qalin jabinaysa jaamacadaha Soomaaliya.
Sanadkan oo kaliya jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka baxay in ka badan kun arday, sidaas oo ay tahayna ma helaan marka ay waxbarashada dhamaystaan shaqooyinkii ay ku taami jireen intii ay waxbarashada ku jireen.
Qaar badan oo ka mid ah way tahriibaan, halka qaar kale oo badan ay iska joogaan xaafadaha iyagoon wax camala hayn. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegaysa in ay dadaal ugu jirto sidii ay shaqooyin badan ku abuuri lahayd.